Ungachinja sei theme yeUbuntu uye zvimwe zvekugovera zvinoshandisa Gnome | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kune akawanda madhesiki uye akawanda akaparadzirwa muGnu / Linux, ichokwadi kuti Gnome inoenderera ichive, pamwe naPlasma, madzimambo eGnu / Linux desktop. Munguva pfupi yapfuura Ubuntu yakaisa Gnome sedesktop yayo huru uye izvo zvinoita vazhinji vashandisi vanofarira kuziva maitiro ekugadzirisa iyi desktop uye nekugovera.
Ino nguva isu tichaenda kukuudza iwe nzira mbiri dzekugadzirisa Gnome uye iyo Ubuntu desktop uye zvimwe zvakawanda zvakagoverwa zviri nyore uye nekukurumidza.
2 Chinja theme kuburikidza ne terminal
Kwemakore akati wandei pane chishandiso chakadaidzwa Gnome Tweaks iyo inotibatsira isu kuita shanduko dzese dzemusoro graphicallyKuisa Gnome Tweaks isu tinofanirwa kuvhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
Kana tangoisa chirongwa ichi, tinofanirwa kuisa pasuru kana theme yatinoda kuchinja. Kuti tiite izvi, tinosarudza iyo desktop theme uye kuiisa kuburikidza neiyo terminal kana kuburitsa pasuru mufaira / usr / share / madingindira nepafolda / usr / share / mifananidzo, kana isu tichidawo kuchinja ma desktop icons.
Iye zvino zvatave nezvose, isu tinovhura iyo Gnome Tweaks chirongwa uye tigoenda kuChiono menyu. Mune iyo Inoonekwa menyu, akasiyana desktop zvinhu zvichaonekwa, senge desktop desktop, iyo ma icon, iyo inotora kana kunyange desktop kumashure. Mune iyo yekudonha-pasi menyu isu tinosarudza desktop desktop iyo yataisa uye tinya bhatani OK uye vhara iko kunyorera.
Iyi nzira, yakajeka graphical nzira uye yakanaka kune ese marudzi evashandisi, asi pane imwe nzira, nzira kuburikidza neiyo terminal inoita izvi nekukurumidza.
Chinja theme kuburikidza ne terminal
Kuti ushandise iyi nzira, kutanga isu tinofanirwa kuisa iyo desktop theme. Mushure mekuisa izvi, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
With izvi Tinogona kushandura iyo desktop theme iyo Gnome yakamisikidza nekusarudzika kurodha. Ndokunge, isu tichachinja kutaridzika kweGnome, Ubuntu uye chero kupi kugovera kunoshandisa ino desktop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Ungachinja sei theme yeUbuntu uye zvimwe zvekugovera zvinoshandisa Gnome
Paunenge uchida dzidziso uye kurodha maapplication ekuchinja iyo desktop theme, ndipo paunoona uko dhizaini dhizaini iri kuenda
Recalbox 18.06.27 ikozvino yawanikwa nekutamba pamhepo